टेक्नोलोजीसँग परिचित ती तरिकाहरू जसले तपाईंको क्यारियरको लागि तयारी गर्न मद्दत गर्दछ - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
उत्तर अमेरिकाको बिरामी प्रवाह ब्यवस्थापन समाधान बजारले क्यानाडा र अमेरिकामा प्रशिक्षण र अनुदान गतिविधिहरू बढेको, यस क्षेत्रमा टेक्निकल टेक्निकल इनोभेसनको प्रगतिहरूका साथै स्वास्थ्य सेवा खर्चलाई घटाएकोले लाभदायक बृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ।
सम्पादकको पिक मार्च 27, 2021 मार्च 24, 2021 फ्रान्की वालेस अरबी फ्रीलान्स, B2B, शुरुआतीहरूको लागि सर्वश्रेष्ठ फ्रिल्यान्स वेबसाइटहरू, ब्लग, व्यापार, Gigs किन्नुहोस् र बेच्नुहोस्, Gigs किन्नुहोस्, चीनियाँ स्वतन्त्रता, सम्पादकको पिक, FGG कम लागत बजार, फ्रीलान्स ग्लोबल गिग (FGG) कम लागत बजार, फ्रेन्च फ्रीलान्स गिग, gigs, बिक्रीको लागि Gigs, ग्लोबल थोक अनलाइन, ग्लोबल विश्व, हिन्दी फ्रिल्यान्स गिग्स, इन्डोनेसिया फ्रीलान्स गिग्स, अनलाइन थोक र B2B, अनलाइन थोक र B2B बजार, पोर्तुगाली फ्रीलान्स गिग्स, Gigs पोष्ट गर्नुहोस्, रसियन फ्रीलान्स गिग्स, गिगहरू बेच्नुहोस्, तपाईंको Gigs विश्वव्यापी रूपमा बेच्नुहोस्, B2B अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, ग्लोब किन्नुहोस्, थोक अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, साइड Gigs, स्पेनिश फ्रीलान्स गिग, प्रविधि, थोक, थोक - B2B, थोक र B2B बजार, थोक बजार अनलाइन खरीद र बिक्री
आजको कार्यस्थल, तथापि, त्यहाँ पुगेको छ जहाँ औसत रोजगारी खोजी गर्नेलाई प्राविधिक दृष्टिले केन्द्रित क्षेत्रको बाहिरका स्थानहरू प्राप्त गर्न पर्याप्त प्राविधिक सीप चाहिन्छ।
के तपाईंलाई थाहा छ त्यहाँ १२ करोड भन्दा बढी ईकमर्स साइटहरू अवस्थित छन्?
केही प्राविधिक सीपहरूको उद्योग बीच क्रसओभर अपील हुन्छ तर अझै पनि तपाईंको आधारभूत सीपहरू भन्दा सिक्नको लागि अधिक समय लगानी आवश्यक पर्दछ।
COVID-१ p महामारी जस्ता भर्खरका शेकअपहरूले केवल अफिसमा नयाँ प्रविधि अपनाईरहेको दरमा वृद्धि भएको छ।
कार्यस्थलमा टेक्नोलोजीको बृद्धि गर्ने भूमिका
टेक-विशिष्ट कामहरू जहिले पनि अवस्थित छ, र ती प्राविधिक प्राविधिक क्षेत्रहरूमा दक्ष हुन यस्तो स्थान खोज्नेहरूको लागि सँधै फाइदा भएको छ।
यस कार्यमा धेरै काम-सम्बन्धित प्रवृत्तिले योगदान पुर्‍याएको छ, तर आउनुहोस् हामी तीन प्रमुख प्रख्यातलाई हेरौं: अनलाइन व्यवसायको उदय, बढ्दो गिग अर्थव्यवस्था, र "सामान्य" रोजगारीमा टेक्नोलोजिकल तत्त्वहरूको बढ्दो एकीकरण।
व्यापार अनलाइन रिक्त स्थानमा स्थानान्तरण
के तपाईंलाई थाहा छ त्यहाँ छ १२ मिलियन भन्दा बढी ईकामर्स साइटहरू अस्तित्व मा? वर्ष २० consumers० सम्ममा उपभोक्ताहरूले online ०% खरीद अनलाइन गर्ने कुरा कसरी हुन्छ? समय बढ्दै जाँदा, इन्टरनेट मार्फत व्यवसाय सञ्चालन गर्नु सामान्य हुनेछ।
यसको कारणले गर्दा, व्यवसायहरूलाई कर्मचारीहरू आवश्यक छन् जसले अनलाइन स्पेसको प्रकृति बुझ्दछन् र तिनीहरूलाई कसरी नेभिगेट गर्ने। सामाजिक नेटवर्कको ज्ञान, डिजिटल मार्केटिंग, र eCommerce प्रवृत्ति आउने बर्षहरु को ठूलो मूल्य को हुनेछ।
Gig काम लिदै
Gig अर्थव्यवस्था को बढ्दो प्रभाव राम्रोसँग दस्तावेज गरिएको छ। जहाँसुकै तपाईं गिग कामको नैतिकताको पक्षमा उभिएर, दुई तथ्यहरू बहसको लागि मिल्दैन: गिगिंग यहाँ रहनको लागि हो, र धेरै जसो जिगलाई केही प्राविधिक दक्षता चाहिन्छ।
उनीहरूको सबैभन्दा आधारभूतमा, धेरै जसो जीगलाई इन्टरनेटको समझ चाहिन्छ र कसरी सुरू गर्न स्मार्टफोन चलाउन। अधिक उन्नत फ्रिल्यान्स कार्यको लागि तपाईलाई अधिक जटिल टेक्नोलोजिकल सीपहरू चाहिन्छ जस्तै विशेष सफ्टवेयर वा कम्प्युटर प्रोग्रामिंग भाषाहरूको ज्ञान।
अफिसमा टेक प्रसार
२०१ early को रूपमा प्रारम्भिक, प्यू अनुसन्धान केन्द्र जस्ता अधिकारीहरूले नोट गरे कि डिजिटल उपकरणहरू अधिकांश मजदुरहरूले व्यवसाय गरेको तरीकाले रूपान्तरण गरिरहेका थिए। २०२१ सम्म द्रुत अगाडि, र COVID-१ p महामारी जस्ता भर्खरका शेकअपहरू केवल दर बढेको छ जसमा व्यवसायहरूले कार्यालयमा नयाँ प्रविधि अपनाइरहेका छन्।
नयाँ प्रविधिको कार्यान्वयनको कार्य द्रुत गतिमा जारी रहनेछ। व्यवसायको लागि, टेक्नोलोजिकल परिवर्तनको यस बढ्दो दरको अर्थ यो हो कि सब भन्दा वांछित कर्मचारीहरू तिनीहरू हुन् जसले लगातार नयाँ प्रविधिको लागि कुनै मुद्दा बिना अनुकूलन गर्न सक्दछन्।
किन टेक सीप मेटर
यी प्रवृत्तिको परिणामको रूपमा (र स्पेक्ट्रम भर कार्यस्थलहरूमा प्रविधिमा बढ्दो निर्भरता), प्राविधिक सीपहरू हुनु भनेको तपाईंलाई अधिक आकर्षक उम्मेदवार बनाउनको लागि केवल बोनस मात्र होइन, तिनीहरू शीर्ष उम्मेदवार बन्न तपाईंको लागि महत्वपूर्ण हुन सक्छ। तपाईंको रिजुमेमा तपाईंको प्रविधि कौशल हाइलाइट गर्ने बारेमा विशिष्ट हुनुहोस्; यदि तपाईंलाई केहि सफ्टवेयर प्रोग्रामहरू थाहा छ भने, तपाईको दक्षताको स्तरको बारेमा स्पष्ट हुनुहोस्।
मोटामोटी रूपमा बोल्दा, प्रविधि कत्ति कम डराउँदछ जब तपाईं यसलाई बुझ्नुहुन्छ, र यी सीपहरू अपनाउँदा तपाईंको क्यारियर पथ भविष्य-प्रमाणित हुनेछ जबकि एकसाथ तपाईं एक उत्तम समस्या समाधान गर्ने, नेता, र टोली प्लेयर बनाउनुहुनेछ।
अझ बढी, टेक सीपले तपाईंलाई युवा पुस्ताहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न मद्दत गर्दछ, जो अक्सर कार्यबलमा उभरिरहेका भूमिकाहरू सम्हाल्नको लागि राम्रोसँग सुसज्जित हुन्छन्। यदि तपाईं पहिले नै सबै नयाँ आविष्कारहरूसँग गति लिन तयार हुनुहुन्न, यद्यपि तपाईंले सुधार गर्नका लागि समय लगानी गर्न आवश्यक पर्दछ।
तपाईं कसरी कामको भविष्यको लागि तयारी गर्न सक्नुहुन्छ
यदि तपाईं पहिले नै टेक्नोलोजीसँग परिचित हुनुहुन्न भने, आत्म-शिक्षा र औपचारिक कक्षाको संयोजनले तपाईंलाई गतिमा अप गर्न मद्दत गर्दछ। सामान्यतया बोल्दै, तपाइँ निम्न क्रममा तपाइँको टेक सीप निर्माणमा ध्यान दिन चाहानुहुन्छ:
सब भन्दा साधारण टेक कौशल संगै शुरू गर्नुहोस्
यदि तपाइँ प्रविधिको सम्बन्धमा हितोपदेश भुईं फ्लोरमा शुरू गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसो भए तपाईको पहिलो चरण द्रुत गतिमा हुनुपर्दछ सब भन्दा आधारभूत टेक सीपहरु कि आधुनिक रोजगारदाताहरूले तपाइँले थाहा पाउनु हुनेछ। यी सीपहरू धेरै सामान्य हुन्छन् र तपाईले थाहा पाउनु पर्ने आधारभूत स्तरको रूपमा काम गर्छ यदि तपाईं एक कामको लागि दौडमा जान चाहनुहुन्छ भने। यस कोटीले कसरी ईमेल, वर्ड प्रोसेसरहरू, स्प्रेडशीट प्रोग्रामहरू, र सोशल मिडिया प्रयोग गर्ने जान्ने समावेश गर्दछ।
टेक सीपले तपाईंलाई युवा पुस्ताहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न मद्दत गर्दछ, जो अक्सर कार्यबलमा उभरिरहेका भूमिकाहरू प्रबन्ध गर्न उत्तम सुसज्जित हुन्छन्
तपाईंको मिड-टियर कौशल निर्माण गर्नुहोस्
केही प्राविधिक सीपहरूको उद्योग बीच क्रसओभर अपील हुन्छ तर अझै पनि तपाईंको आधारभूत सीपहरू भन्दा सिक्नको लागि अधिक समय लगानी आवश्यक पर्दछ। यिनीहरूले तपाईंलाई नयाँ रोजगारी खोज्नेहरूको संख्याबाट फरक पार्दछ, यद्यपि तिनीहरू सिक्नको लागि समयको योग्य छन्। यस कोटीले डाटा एनालिटिक्स, एचटीएमएल, डिजिटल मार्केटिंग रणनीतिहरूको ज्ञान, र जस्तै।
आवश्यक परेको विशेष कौशलमा फोकस गर्नुहोस्
यदि तपाईं एक विशेष क्षेत्र मा जाँदै हुनुहुन्छ वा तपाईंको आफ्नै टेक व्यवसाय सुरू गर्दै, त्यसो भए तपाईलाई प्राप्त गर्नका लागि मद्दतको लागि अझ उन्नत सीपहरूको आवश्यक पर्दछ, तर तपाईले ती कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुहुनेछ जब तपाईंलाई निश्चित रूपमा थाहा हुन्छ कि कुन क्यारियर पथ तपाईंको फोकस हुनेछ। विशेष प्राविधिक सीपहरूका उदाहरणहरूमा विशिष्ट प्रोग्रामिंग भाषाहरूको ज्ञान, नेटवर्क सुरक्षा, र कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मेशिन शिक्षा, र स्वचालन टेक्नोलोजीको साथ प्रवीणता समावेश छ।
तपाईंको कौशल निर्माण गर्नुहोस् र तपाईंको पुनःसुरू अपडेट गर्नुहोस्
तपाईको प्राविधिक शक्तिको क्षमता जति बढी हुन्छ, भविष्यका प्रमाणहरू तपाई एक कर्मचारीको रूपमा हुनेछन्। यदि तपाइँको प्राविधिक सीपहरू अहिले अभावमा छन् भने, यसलाई तपाइँको सीप सुधार गर्न र एक अधिक मूल्यवान कर्मचारी मा आफैलाई रूपान्तरण गर्न को लागी आमन्त्रित विचार गर्नुहोस्।
आधारभूत प्राविधिक सीपहरू निर्माण गरेर बिस्तारै सुरू गर्नुहोस्, र अधिक जटिल सीपहरूको साथ पूरक जुन तपाईंले आफ्नो प्रगतिको रूपमा रूचि राख्नु भएको फिल्डहरूमा लागू हुन्छ।
समय मा, तपाईं आधुनिक कार्यस्थल को बदलिएको अवस्था अनुकूल गर्न को लागी सक्षम हुनेछ र एक बहुमूल्य सम्पत्ति रहन - आविष्कार हुने घटनाहरु लाई पर्वाह नगरी।
उन्नति सांप्रदायिक समाचार कामको भविष्य टेक टेक सीपहरू प्रविधि कार्यस्थल
फ्रान्की वालेस मोन्टाना विश्वविद्यालयबाट भर्खरको स्नातक हुन्। वालेस हाल बोइज, इडाहोमा बस्छन् र व्यवसाय, मार्केटि,, र टेक्नोलोजीसँग सम्बन्धित शीर्षकहरूको बारेमा लेख्न रमाउँदछन्।